“थु’तुनो बढी चल्छ ? कन्ट्रोल गर्नाेस्, केवल ५ मिनेटमा !:: Mero Desh
“थु’तुनो बढी चल्छ ? कन्ट्रोल गर्नाेस्, केवल ५ मिनेटमा !
Published on: १५ जेष्ठ २०७८, शनिबार १०:१९
काठमाण्डौ थुतुनो बढी चल्छ ? कन्ट्रोल गर्नाेस्, केवल ५ मिनेटमा !थुतुनो नियन्त्रण’ आजको मुख्य आवस्यकता हो । जिब्रो चल्नु र चिप्लिनु फरक कुरा हुन् । जिब्रो चलाउन नजानेर चिप्लिंदा इमान खुस्किन्छ । इज्जत भांचिन्छ । चाहिनेभन्दा बढी चल्दा नैतिकता मर्किन्छ । प्रतिष्ठामा चोट लाग्छ ।
आउनोस्, थुतुनो नियन्त्रणका आधा दर्जन उपायको अब गजुरीयल विश्लेषण गरौं ।१. सबैभन्दा पहिले दिमागलाई ठण्डा राख्नु पर्दछ । किनकी शरीरका प्रत्येक अंगहरु मस्ति ष्कसंग जोडिएका हुन्छन् । जिब्रो त झन् दिमागको सबै भन्दा नजिकको मित्र पऱ्यो । माथा गरम हुँदा जिब्रोलाई लटर पटर बनाईदिन्छ । लटर पटर जिब्रोले भन्नुपर्ने कुरो बिर्सिन्छ, नभन्नु पर्ने कुरो चिप्ल्याई दिन्छ ।
६. देख्दा जिब्रो पुग-नपुग २०० ग्राम होला । तर, शरीरमा यसको ठुलो महत्व छ । दुई इन्चीको जिब्रोको स्वादकालागि सिंगो शरीर अस्वस्थ नबनाऔं । त्यती सानो जिब्रो कारणले सिंगो नामलाई बदनाम नगराऔं । जिब्रो नियन्त्रण गरौं, मानसिक र सामाजिक स्वास्थ शिष्ट र सभ्य बनाउँ ।गजुरियल बाट साभार